ပင်ပန်းလို့ခနနားနေတာ ဘယ်တော့ မှသွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ G fatt – Cele Oscar
March 26, 2021 By L YC News
အဆိုတော် G Fatt ကတော့ တေးသီချင်း တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ရေးသား သီဆိုနေ တဲ့ လူငယ် တေးသံရှင် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ် ပီပီ အမှန်တရားဘက် ကနေ ရပ်တည် ပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာ အခန်းကဏ္ဍ ကနေ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ G Fatt ကို တော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက လေးစားနေ ကြတာပါ။
လက်ရှိ အခြေအနေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော့ သူ့ရဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက် တွေကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ တွင် အမြဲ ရေးသားဝေ မျှပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်း လောက်ကလည်း G Fatt ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေတဲ့ လူငယ် တွေကို အပြစ် မမြင်ဘဲ အကောင်းဘက် ကတွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” နည်းနည်း ပင်ပန်းလို့ ခဏနားတာ ​တော့ရှိမယ် ​သွေး​အေး​ နေတာမဟုတ်ဘူး ။ လူ​တွေ အသ လွတ်သတ်​ နေလို့ ဘယ်နည်းလမ်း​ ကောင်းမလဲ ခဏ စဉ်းစားတာ လည်း ဖြစ်တယ် ။
ဒီမတရားမှု တွေအ​ပေါ် ​နေသား ကျသွားစရာ အ​ကြောင်း မရှိဘူး။ လမ်း​တွေ အဖယ်ခံ ရတိုင်း ရင်ထဲက မတရားမှု​ တွေက လမ်း​တွေလို ရှင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ရပ်ကွက် ထဲက ဒလန်​ တွေလည်း မြဲမြဲ မှတ်ထား ခင်ဗျားတို့ လုပ်ရက် အတွက် ဘဝ​ပေး အသက်​ ပေးလိုက် ရတဲ့ လူငယ်​တွေ ကိုယ် စား ကျန်တဲ့ လူငယ်​ပေါင်းများ စွာက ခင်ဗျား တို့ကို ဘယ်တော့မှ ကမ္ဘာမ​ကြေဘူး ။ ​ခေါင်းကို ချည်းတည် ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူ​တွေလည်း နောင် တစ်ချိန် ဘယ်အ​ကြောင်း ပြချက်​ပေး​ပေး ကျွန်​တော် တို့ ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဆို​တော့ .. စည်းလုံးမှု အားဟာ အရှိန်မကျပါဘူး ။
ကန့်လန့် လိုက်တိုက်မယ့် လူကြီး​ တစ်ချို့ ရှိ​ပေမယ့် တစ်ကယ် အားတက်သ​​ရော ပါဝင် ကြတဲ့ လူကြီး​တွေလဲ ဒု နဲ့ ​ဒေးပဲ ဘယ်သူ ကန့်ကွက် ကန့်ကွက် ကျွန်​တော်တို့က ဒီမတရား မှု​တွေကို တွန်းလှန် မှာပဲ ။ ကျွန်​တော်တို့ GZ ​​တွေ ကို ကာကွယ်​ဖေးမမယ် ။ သူတို့​အောင်ပွဲ အတွက် ကျွန်​တော်တို့ ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ စဉ်းစား ဝန်းရံမယ် ။အား​ပေး​ ဖေးမမယ် ။ လူကြီးတစ်ချို့လည်း အမြင်​ ပြောင်း​စေချင် တယ် တစ်ခြားနိုင်ငံက လူငယ်တွေကို ​”တော်လိုက်တာ” “ထက်မြက်လိုက်ကြတာ” စသဖြင့် အားကျ ချီးကျူး ဖူးတယ် မလား ? ကျွန်​​တော်တို့ ဆီက က​လေး​တွေ မှာ လည်း အဲ့ထက် မ​လျော့တဲ့ အရည်အချင်း​ တွေရှိတယ် ၊ နိုင်ငံခြားသား တစ်​​ယောက် မြင်တိုင်း Auto အထင်ကြီးစိတ်ဝင်တဲ့ မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူး ။ရင်​ဘောင် တန်းပြမယ့် မျိုးဆက် ဖြစ်တယ် ။
ဒီ အ​ရေး​တော်ပုံ​ အောင်လို့ ဒီမိုက​ရေစီ ရရင် ဒီနိုင်ငံ ကို သူတို့ လက် နဲ့ ဆွဲတင်ပြကြလိမ့်မယ် ။ ​စောင့်ကြည့်။ အဓိက ​ပြောချင်တာ က​တော့ က​လေး​တွေ ကိုအား​ပေးပါ ၊ ကာကွယ်ပါ ၊ ဝိုင်း​စောင့်​လျောက်ပါ။ ဦး​လေးတို့ အ​ကြောက်တရား နဲ့ အန်တီတို့ စိုးရိမ်စိတ်ကို ကျွန်​တော်တို့ နားလည်ပါတယ် ။ ဒီပွဲ မနိုင် နိုင်ဘူးလို့ ဦးတို့အန်တီ တို့ ​ထင်​နေတာ လည်း နားလည်ပါတယ် ။ဒါ​ပေမယ့် ကျွန်​တော် တို့က လူငယ်​တွေပါ ကျွန်​တော် တို့မှာ ယုံကြည်ချက်​တွေ ​ရော အနာဂါတ်​တွေ​ရော အမှားအမှန် ခွဲခြားနိုင်စွမ်း​တွေ​ ​ရော တိုင်းပြည်ကို ချစ်စိတ်​ တွေ​ရော အပြည့်ရှိတယ် ။ ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာကို ပရိသတ်တွေ လည်း သိရှိစေရန် အတွက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
အဆိုတျော G Fatt ကတော့ တေးသီခငျြး တှကေို ကိုယျတိုငျ ဖနျတီး ရေးသား သီဆိုနေ တဲ့ လူငယျ တေးသံရှငျ တဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူငယျ ပီပီ အမှနျတရားဘကျ ကနေ ရပျတညျ ပွီး လူထု လှုပျရှားမှု တှမှော ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ ပူးပေါငျးပါဝငျ နတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကရြာ အခနျးကဏ်ဍ ကနေ ကူညီဆောငျရှကျ ပေးနတေဲ့ G Fatt ကို တော့ ပရိသတျတှေ အားလုံးက လေးစားနေ ကွတာပါ။
လကျရှိ အခွအေနေ နဲ့ ပတျသတျပွီး တော့ သူ့ရဲ့ ထငျမွငျ ယူဆခကျြ တှကေို လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာ တှငျ အမွဲ ရေးသားဝေ မြှပေးနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ ရကျပိုငျး လောကျကလညျး G Fatt ရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျ လူထု လှုပျရှားမှုတှေ မှာ တကျကွှစှာ ပါဝငျနတေဲ့ လူငယျ တှကေို အပွဈ မမွငျဘဲ အကောငျးဘကျ ကတှေးပေးကွဖို့ တောငျးဆို လိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” နညျးနညျး ပငျပနျးလို့ ခဏနားတာ ​တော့ရှိမယျ ​သှေး​အေး​ နတောမဟုတျဘူး ။ လူ​တှေ အသ လှတျသတျ​ နလေို့ ဘယျနညျးလမျး​ ကောငျးမလဲ ခဏ စဉျးစားတာ လညျး ဖွဈတယျ ။
ဒီမတရားမှု တှအေ​ပျေါ ​နသေား ကသြှားစရာ အ​ကွောငျး မရှိဘူး။ လမျး​တှေ အဖယျခံ ရတိုငျး ရငျထဲက မတရားမှု​ တှကေ လမျး​တှလေို ရှငျးသှားမှာ မဟုတျဘူး ။ ရပျကှကျ ထဲက ဒလနျ​ တှလေညျး မွဲမွဲ မှတျထား ခငျဗြားတို့ လုပျရကျ အတှကျ ဘဝ​ပေး အသကျ​ ပေးလိုကျ ရတဲ့ လူငယျ​တှေ ကိုယျ စား ကနျြတဲ့ လူငယျ​ပေါငျးမြား စှာက ခငျဗြား တို့ကို ဘယျတော့မှ ကမ်ဘာမ​ကွဘေူး ။ ​ခေါငျးကို ခညျြးတညျ ပဈခဲ့ကွတဲ့ သူ​တှလေညျး နောငျ တဈခြိနျ ဘယျအ​ကွောငျး ပွခကျြ​ပေး​ပေး ကြှနျ​တျော တို့ ခှငျ့လှတျမှာ မဟုတျဘူး ။ ဆို​တော့ .. စညျးလုံးမှု အားဟာ အရှိနျမကပြါဘူး ။
ကနျ့လနျ့ လိုကျတိုကျမယျ့ လူကွီး​ တဈခြို့ ရှိ​ပမေယျ့ တဈကယျ အားတကျသ​​ရော ပါဝငျ ကွတဲ့ လူကွီး​တှလေဲ ဒု နဲ့ ​ဒေးပဲ ဘယျသူ ကနျ့ကှကျ ကနျ့ကှကျ ကြှနျ​တျောတို့က ဒီမတရား မှု​တှကေို တှနျးလှနျ မှာပဲ ။ ကြှနျ​တျောတို့ GZ ​​တှေ ကို ကာကှယျ​ဖေးမမယျ ။ သူတို့​အောငျပှဲ အတှကျ ကြှနျ​တျောတို့ ကိုယျစှမျး ဉာဏျစှမျးရှိသမြှ စဉျးစား ဝနျးရံမယျ ။အား​ပေး​ ဖေးမမယျ ။ လူကွီးတဈခြို့လညျး အမွငျ​ ပွောငျး​စခေငျြ တယျ တဈခွားနိုငျငံက လူငယျတှကေို ​”တျောလိုကျတာ” “ထကျမွကျလိုကျကွတာ” စသဖွငျ့ အားကြ ခြီးကြူး ဖူးတယျ မလား ? ကြှနျ​​တျောတို့ ဆီက က​လေး​တှေ မှာ လညျး အဲ့ထကျ မ​လြော့တဲ့ အရညျအခငျြး​ တှရှေိတယျ ၊ နိုငျငံခွားသား တဈ​​ယောကျ မွငျတိုငျး Auto အထငျကွီးစိတျဝငျတဲ့ မြိုးဆကျမဟုတျဘူး ။ရငျ​ဘောငျ တနျးပွမယျ့ မြိုးဆကျ ဖွဈတယျ ။
ဒီ အ​ရေး​တျောပုံ​ အောငျလို့ ဒီမိုက​ရစေီ ရရငျ ဒီနိုငျငံ ကို သူတို့ လကျ နဲ့ ဆှဲတငျပွကွလိမျ့မယျ ။ ​စောငျ့ကွညျ့။ အဓိက ​ပွောခငျြတာ က​တော့ က​လေး​တှေ ကိုအား​ပေးပါ ၊ ကာကှယျပါ ၊ ဝိုငျး​စောငျ့​လြောကျပါ။ ဦး​လေးတို့ အ​ကွောကျတရား နဲ့ အနျတီတို့ စိုးရိမျစိတျကို ကြှနျ​တျောတို့ နားလညျပါတယျ ။ ဒီပှဲ မနိုငျ နိုငျဘူးလို့ ဦးတို့အနျတီ တို့ ​ထငျ​နတော လညျး နားလညျပါတယျ ။ဒါ​ပမေယျ့ ကြှနျ​တျော တို့က လူငယျ​တှပေါ ကြှနျ​တျော တို့မှာ ယုံကွညျခကျြ​တှေ ​ရော အနာဂါတျ​တှေ​ရော အမှားအမှနျ ခှဲခွားနိုငျစှမျး​တှေ​ ​ရော တိုငျးပွညျကို ခဈြစိတျ​ တှေ​ရော အပွညျ့ရှိတယျ ။ ” ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာကို ပရိသတျတှေ လညျး သိရှိစရေနျ အတှကျ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူ တငျဆကျ ပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။